Wararka - Ma ogtahay waxa ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid marka aad isticmaaleyso ciddiyaha.
Marka laga hadlayo manicure, waxaan si dabiici ah uga fikirnaa saliida ciddiyaha midabka leh, dhalaalaya.Laakiin jirkan dhalada yar, sidoo kale u eg midabka iyo muuqaalka, waxaa jira qarsoodi weyn, maanta in lala wadaago qaar ka mid ah isticmaalka saliida ciddiyaha xoogaa caqli gal yar qof walba.
1. Rux birta ka hor intaadan codsan.
Kahor dalbashada booliska, hubi in dhalada la sugay oo rux 20 ilaa 30 ilbidhiqsi. Gariirku wuu sii weynaadaa, tayada boolisku wuu sii fiicnaanayaa. Haddii aadan waxba maqli karin markaad gariirto, waa calaamad xun.
Intaas waxaa sii dheer, ciddiyaha ciddiyaha ayaan laheyn nolol shelf, ilaa dhalada aysan si sax ah isugu xirneyn ama aan loo keydinin, mar kasta oo aad isticmaasho ciddiyaha, nadiifi oo si nadiif ah u dhig dhalada, xitaa cidiyaha cusub ee ciddiyaha waa in sidoo kale lagu kaydiyaa hooska.
2. Burushka loo isticmaalo in lagu mariyo boolisku way ku kala duwan yihiin ciddiyaha ilaa ciddiyaha.
Cadayga ciddiyaha, sida buraashka indhaha, waxay kuxirantahay xaalada. Haddii ciddiyaha uu dheer yahay, ganaaxsan yahay oo cidhiidhi yahay, tixgeli inaad isticmaasho burush yar si aad uga fogaato rinjiyeynta ciddiyaha ka baxsan ciddiyaha maxaa yeelay burushku wuu ka weyn yahay ciddiyaha.Taabadalkeed, u isticmaal burush ballaadhan ciddiyaha ballaadhan.
3. Codso salka jaakadda dhammeysa nalka ee dhalada iyo midab cad.
Sababtoo ah midabka dhaadheer ee faransiiska oo aan aad u urursaneyn, ma fududa in la daboolo, cagaarka guud ahaan wuxuu ubaahan yahay in la mariyo seddex lakab si loo daboolo midabka ciddiyaha, markaa mari lakabka saliida ciddiyaha cad waa xulasho wanaagsan, marka lagu daro, sidoo kale ubaahan si aad u dalbato si siman, haddii ay jiraan dhowr dhumucdiisuna ay ka duwan tahay, waxay muujin doontaa saliidda ciddiyaha cad.
Ciddiyaha dhalaalaya ee dhalaalaya waxay ka kooban yihiin midab isku mid ah sida ciddiyaha caadiga ah. Sida saliida caadiga ah, waxaad u baahan tahay inaad mariso jaakad salka ah si aad u ilaaliso ciddiyahaaga ka hor intaadan dalbanin ciddiyaha dhalaalaya, isla markaana mari jaakad kale 2 ilaa 3 maalmood kadib.
4. Biyaha barafku waxay dardar geliyaan qalajinta ciddiyaha.
Haddii ay dhacdo cadaadis waqtiga, waxaan tixgelin karnaa isticmaalka biyaha barafka si loo dedejiyo qalajinta ciddiyaha, laakiin marka hore, waa inaan sugno illaa inta dusha sare ee ciddiyaha gebi ahaanba qallalayo.
Dadka qaarkiis waxay isku dayaan inay dib ugu soo celiyaan ciddiyaha dhibicyo yar oo ah kuwa cirbadaha laga gooyo, taas oo aan khalad ahayn oo keliya, laakiin sidoo kale aad u xun. Markaad sidaas sameyso waxay jebin doontaa qaabdhismeedka kiimikada ee boolisku. Waxaa jira khafiifiyeyaal ciddiyaha khafiifiya oo khafiifin kara barta marka ay isku dhegto, laakiin mashiinka masaxda ciddiyaha waa in aan loo isticmaalin duruuf kasta oo jirta.
5. Ciddiyaha ciddiyaha ma laha waqti xadidan.
Khaladka haween badani sameeyaan ayaa ah inay ku degdegaan inay saddex maalmood gudahood kaga saaraan ciddiyaha, iyagoo u malaynaya inay taasi u tahay caafimaadka ciddiyaha. Xaqiiqdii, ciddiyaha si aad u ilaaliso seddex maalmood, siddeed maalmood ama nus bil waa caadi.
Si aanad u engejin ciddiyahaaga, waa inaad marka hore ka qaaddaa cidiyaha cidiyaha leh mashiinka wax lagu gooyo oo aan ku jirin acetone. Kadib, iska riix maqaarka dhintay ee hareeraha cidiyahaaga. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, xoq cidiyahaaga oo mari jaakad wax lagu nadiifiyo dusha cidiyahaaga si aad u dhigto aasaaska jaakadda dambe ee midabayntaada.
Iskusoo wada duuboo, kuwan waa waxyaabaha ay tahay inaan maanka ku hayno marka aan isticmaaleyno ciddiyaha nolosheena. Ma xasuusataa?